3D scanning tech etinyere na akpakanamde Industrylọ Ọrụ
site na Createproto Rapid Manufacturing na Jul 07, 2021
Ntinye ngwa ngwa Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala, ndị na-emepụta akara dị iche iche na-asọ mpi maka ịdị mma, nhazi CNC, mbipụta 3D, akwa laminating, wdg emeela nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ ala ụlọ na mba m na-arịwanye elu, na ...
Kedu ihe ị kwesịrị ịma maka ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ 3D?
site na Createproto Rapid Manufacturing na Jul 02, 2021
3D-ebi akwụkwọ technology na-akpọ mmako n'ichepụta technology, nke dabeere na digital nlereanya faịlụ, iji powdered metal ma ọ bụ plastic na ndị ọzọ bondable ihe na-ewu ihe site ebi akwụkwọ oyi akwa site na oyi akwa. 3D ebi akwụkwọ a na-emekarị-enweta site na iji dijitalụ technology m ...
Gịnị bụ echiche nke CNC machining nkenke akụkụ?
site na Createproto Rapid Manufacturing na Jun 24, 2021
The machining ziri ezi nke CNC machining center bụ isi nchegbu nke ndị ahịa. Izizi nkenke nke CNC machining center na-ezo aka ogo nke nkenke nke ngwaahịa ahụ. Na machining ụlọ ọrụ, machining ziri ezi na machining njehie bụ ma okwu maka evaluatin ...
3D Printing na akpakanaka ịzọpụta oge na-eri
site na Jun 22, 2021
N'ịbụ nke ndị mgbasa ozi kpaliri, mbipụta 3D pụtara n'ihu ọha dị ka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ, na mmetụta mgbasa ozi ya rutere elu ya mgbe 2023. N'ezie, mbipụta 3D ka bụ n'ezie teknụzụ nrụpụta. Na-adịbeghị anya, mba m na n'ichepụta ụlọ ọrụ mepụtara rapidl ...
Top 10 CNC machining ọrụ ụlọ ọrụ
site na Jun 18, 2021
1. Protolabs www.protolabs.com N'ime 30 plastic na metal CNC machining ihe dị maka arụmọrụ prototypes na ọgwụgwụ-eji akụkụ dị ka ngwa ngwa dị ka 1 ụbọchị. Nweta a quote na free imewe. 2. Xometry www.xometry.com Online CNC machining ọrụ àjà ozugbo ruturu na elu-prec ...
Kedu otu esi achọpụta ụdị ngwa ngwa kachasị ngwa ngwa?
site na CreateProto Rapid Manufacturing na Jun 17, 2021
Ka ị na-aga n’ihu njem gị nke ịzụlite na iweta ngwaahịa ọhụrụ n’ahịa, ị nwere ọtụtụ mkpebi ị ga-eme mgbe a bịara n’ichepụta ihe - ma ị ga-ebido ngwaike ma ọ bụ ngwaahịa sọftụwia, ma ọ bụ njikọta nke abụọ ahụ. ị kwesịrị inwe prototype ...
3D Metal Printing - 7 Ezighi ezi echiche agbaghara
site na CreateProto Rapid Manufacturing na Jun 10, 2021
Enweghị nghọta nke ike 3D mbipụta ike na-agaghị emeli ka bụ otu n'ime ndị isi nsogbu ka ukwuu doo nke teknụzụ. Echiche na-ezighi ezi nke bilitere na teknụzụ na-eme ka ọkụ ka njọ. N'isiokwu nke taa, anyị ga-ewepụ ụfọdụ n'ime ...
Gịnị bụ Rapid Micro Staping Machining?
site na CreateProto Rapid Manufacturing na Jun 01, 2021
Mgbape mepee ngwaọrụ elektrọnik ọ bụla ma ị ga - ahụ ọtụtụ obere ihe n’ime. Imepụta njikọta na ọta ndị a bụ ọrụ dị mgbagwoju anya, na-esiri ya ike karịa stampụ, ekwe, na ịkpụzi arụ na akụkụ buru ibu karị. Maka otu ihe, njirimara nke ọ bụla na nke ...
Olee otú CNC Technology akpaaka Dịkwuo Were n'Ọrụ arụmọrụ
site na CreateProto Rapid Manufacturing na Mee 12, 2021
Otu nsogbu ndị ụlọ ahịa teknụzụ CNC gara nke ọma na-enweta bụ uto Ee, ọ dị ịtụnanya na uto azụmaahịa gị bụ okwu esemokwu mana ọ bụ otu ahụ. Isi nlebara anya nke ndị nwe ụlọ ahịa igwe mgbe ahịa ha toro bụ ndị ọrụ. Ọ na-ewe oge karịa f ...
Nwụrụ-mgbatị akụkụ imewe bụ dị ka mkpa dị ka ngwá ọrụ
site na CreateProto Rapid Manufacturing na Apr 19, 2021
Die mgbatị kwubara elu na ndepụta nke mkpa metalworking Filiks. Dị ka ụdị mgbatị ndị ọzọ, a wụsara ọla a wụrụ awụ n'ime akụkụ abụọ, mana nkedo anwụ na-eme nke a n'okpuru nrụgide, na-amanye ihe a n'ime oghere na oghere ọ bụla nke oghere dị n'ime. Nke a pụtara na anwụ cas ...
Createproto mere ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa 3D ibipụta akwụkwọ teknụzụ ihe Craphene
site na CreateProto Rapid Manufacturing na Apr 13, 2021
Oge mbu nke Createproto jiri graphene mee ngwa ngwa ngwa maka ihe ndị ahịa chọrọ nke ike kachasị ike, mgbe otu ọnwa gachara, e mechara bipụta ngwa ngwa ngwa ahịa. Ka ọ dị ugbu a, ihe obibi akwụkwọ 3D dị n'ahịa bụ plastik, m ...
Atụmatụ ụgbọ elu (Nkebi nke 2): Horbawanye Horizons
site na CreateProto Rapid Manufacturing na Oct 25, 2020
Ka anyị tụlee usoro nke usoro ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ na ihe atụ ebe iji ọrụ nke onye nrụpụta ihe nnwale maka nnwale nnwale. Ndị na-eme mkpebi injinia n'oge a tụlere iji ike mgbakọ na mwepụ arụ ọrụ n'oge a abaghị uru yana dịka onye na-eri oge. Mgbasa ...
ISO 9001: 2015 AHERR.
Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, CNC Rapid Prototyping, CNC Prototyping, Otito Prototyping, Fast Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing,